FIAROVANA TONTOLO IAINANA : Olona telo tratra nandoro tanety nogadraina
Lehilahy telo no naiditra am-ponja vonjimaika noho ny doro tanety, rehefa nandalo fampanoavana tao amin’ny Fitsarana ambaratonga voalohany teto Mahajanga. 8 août 2019
Ny sabotsy 3 aogositra dia may ny velaran-tany 35 ha izay nisy alan-kesika tao Tsaramandroso, distrikan’i Ambatoboeny, faritra Boeny amin’iny lalam-pirenena fahaefatra iny. Rehefa natao ny famotorana dia olona telo no noahiahiana ho nahavanon-doza ka nosamborin’ny ben’ny ala sy ny zandary tao Maevarano, Kaominina Tsaramandroso. Niaiky ireto farany fa tompon’antoka noho ny tsy fifehezana ny afom-panadiovana natao ka niitatra ho doro tanety, ary natolotra ny fampanoavana, ka izao naiditra am-ponja vonjimaika ao Marofoto izao.
Araka ny fomba fiteny taty aoriana mantsy dia « izay mandoro tanety hono mandoro tanindrazana ». Fahavalom-pirenena ny mpandoro tanety ary miezaka hatrany ny DIREDD mba hanafaizana ireo tratra ho anatra ho an’ny hafa, satria raha ny voafaritry ny Didy hitsivolana 60-127 dia roa ka hatramin’ny dimy taona an-tranomaizina no sazy ho an’ny mpandoro tanety. Ampahafantarina ny rehetra, hoy ny tale iraisam-paritry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra ,fa misy ny lalàna ary natao harahina izy ireny. Hatramin’izay mantsy dia heverina fa tsy mahavoasazy ny fandroroana tanety.
Manambara kosa ireo ben’ny ala fa ilana fiaraha-mientana ny fiarovana ny tontolo iainana satria samy tompony sy samy miaina amin’izany isika mianakavy. Hatramin’ny volana mey 2019 dia 17 no isan’ireo olona naiditra am-ponja vonjimaika noho ny fandikan-dalàna ara-tontolo iainana tato amin’ny Faritra Boeny sy Betsiboka.